Manchester City Oo Curyaaminaysa Real Madrid & Xiddiga Kaliya Ee Ancelotti Ku Tiirsan Yahay Ee Guardiola Uga Yeedhayo Etihad Stadium - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaManchester City Oo Curyaaminaysa Real Madrid & Xiddiga Kaliya Ee Ancelotti Ku Tiirsan Yahay Ee Guardiola Uga Yeedhayo Etihad Stadium
Manchester City Oo Curyaaminaysa Real Madrid & Xiddiga Kaliya Ee Ancelotti Ku Tiirsan Yahay Ee Guardiola Uga Yeedhayo Etihad Stadium
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa lagu soo warramayaa inay xidhiidh la yeelatay xiddiga ugu muhiimsan Real Madrid ee waqtigan ay isku hallaynayaan Carlo Ancelotti iyo Florentino Perez, kaas oo haddii uu ka baxo Santiago Bernabeu ay adkaanayso inay beddelkiisa helaan.
Real Madrid ayaa xilli ciyaareedkan bandhig fiican ka samaynaysa garoomada, waxaanay guulaha uga mahad-celinayaan Karim Benzema oo ah laacibka goolasha ugu badan u dhaliyey, caawintiisuna tahay midda Vinicius Junior ka dhigtay laacibka labaad ee ugu goolasha badan horyaalka LaLiga.
Inkasta oo saddexda rukun-dhexe ee Modric, Kroos iyo Casemiro oo lagu daray Eder Militao iyo David Alaba ay xilli ciyaareed fiican qaadanayaan, haddana ma jiro ciyaartoy u wanaagsan sida Karim Benzema oo kale.
Laacibka reer France ayaa 17 kulan oo dhamaan tartamada ah oo uu u saftay Real Madrid, waxa uu u dhaliyey 15 gool, isaga oo ku daray siddeed kale oo uu caawiye ka noqday.
Xiddiga reer France oo qandaraaskiisa Real Madrid ku egyahay June 2023, ayaa waxa xidhiidh lasoo samaysay kooxda kubadda cagta Manchester City oo si toos ah ula hadashay wakiilladooda, iyagoo doonaya in dhamaadka xilli ciyaareedkan ay la wareegaan.
Pep Guardiola ayaa doonaya inuu ku riixo Kairm Benzema inuu iska diido heshiis cusub oo uu u saxeexo Real Madrid, si ay kooxda reer Spain ugu qasbanaato inay iibiso suuqa iibka ee xagaaga soo socda maadaama uu bilaash kaga tegi karayo dhamaadka xilli ciyaareedka dambe.
Manchester City oo xagaagii ku guul-darraysatay inay lasoo saxeexato weeraryahanka Tottenham ee Harry Kane oo loo diiday, waxay hadda diiraddeeda usoo leexisay Karim Benzema oo Guardiola uu u arkayo mid si fudud ula falgeli karaya kooxdiisa, isla markaana wax badan kusoo kordhin kara dhinaca gool-dhalinta, caawinta iyo xataa dhismaha kubadda ee gudaha garoonka.
Real Madrid ayaa iyaduna waxay qorshaynaysaa in dhamaadka xilli ciyaareedkan ay lasoo saxeexato Kylian Mbappe oo ay waliba si bilaash ah kaga soo qaadato PSG, iyadoo uu qandaraaskiisuna ku egyahay bisha June, lana filayo in aanu cusboonaysiin heshiiska.
Waxa kale oo ay Real Madrid ka mid tahay kooxaha lala xidhiidhinayo Erling Haaland, taas oo ka dhigan inay isku diyaarinayaan dhismaha koox cusub oo sii shaqayn karta kaddib marka uu Karim Benzema ka baxo Santiago Bernabeu ee uu hawlgab noqdo amaba ay koox kale ka qafaalato.
Karim Benzema ayaa Real Madrid ay sannadkii 2009 kasoo iibsatay kooxda reer France ee Lyon, waxaana uu u saftay 576 ciyaarood oo uu u dhaliyey 294 gool, caawiyena ka noqday 152 kale oo ay asxaabtiisu dhaliyeen. Waxa uu kula guuleystay koobab badan oo ay ku jiraan afar Champions League.
Karim waa legend Realmadrid ah umana malaynayo inu sifudud uga tagi karo, Guardiola qorshihiisuna uma muuqdo mid u hirgalaya, Waxan rajaynayaa benzema inuu kubadda kaga hawlgabi doono caasimadda madrid
Siyaasada Madrid ayaa waxay tahay ciyaartoyga da.diisu dhaafto 30 inay fududahay inuu baxo ku tusaale qaado ronaldo iyo ramos